China Garrison Fence fekitori uye Vagadziri | Hangtong
Iyo bvunzo yenguva inoisa kutsiva kutsiva pane capital expense chinyorwa zvakare uye zvekare. Kupedza nguva, kudhura mutengo uye kazhinji kukanganisira kune kuchengetedzwa kwezvivakwa .Solution- Garrison fenzi.
Iri rinorema basa tubular fenzi rinoita kuti kupinda kwakanyanya kuoma. Kupera neine hutsinye yakanongedza pamusoro, Iyo fenzi ine njodzi kukwira. Muchiitiko ichi kazhinji panopera kusungwa kweanopindira.
Garrison fenzi maficha
1. Inowanikwa seyakadzika 2100mm pakakwirira, iyo firita inogona kupihwa se1800mm kana 2400mm, uye kuitirwa kuyera pakati mbiru pane kumberi kubatana.
2. Magedhi zvakare ari kufananidza uye kushandisa inorema basa hinges, ipa makore enhamo basa. Kugara kwenguva refu kupfuura waya waya zvinogadzirisa mari inoenderera mberi yekushandisa waya yekugadzirisa waya nekutsiva. Powder yakarongedzwa kuti ienderane neyako mamiriro uye chivakwa.
3. Kune mhando mbiri dzerudzi: akatarisana kumeso nechitima, kana akaboorwa kuburikidza nechitima.
Garrison fenzi application
Iyi fenzi ndiyo yekutanga muganho mhinduro kune maindasitiri nekutengesa zvivakwa.
Musoro wepale: nehasha yakanongedza pamusoro
Aluminium inomhanyisa 65 * 65mm Australia yakajairika rudzi rweCap.
Pale yakavharwa kumeso panjanji
Fence kureba (mm)
Fence wide (mm)
Kuora mwoyo (mm)
Qty: Pa (ma PC)
Chikamu Post Chikamu (mm)
Pale yakarangwa kuburikidza nechitima
Pale shandisa galvanized nyoro simbi chubhu
Akakwenenzvera njanji: Akajairwa 40 × 40× 2.5 kana 40 × 40× 1.6 mm simbi chubhu
Kushandiswa kweposvo (65 * 65 * 3.0mm, 65 * 65 * 2.0mm, 75 * 75 * 3.0mm)
Kugadziriswa: mabhureki esimbi kana mabhuronzi ealuminium.
Zvepamusoro: Yakabikwa kana yakarongedzwa ipapo hupfu kukwidza kwapera. Yakaenzana ral color yemutengi sarudza.
Dhipatimendi Rekutumira: EXW, FCA, FAS, FOB, CFR, CIF, CPT, CIP
Yakakurumbira Kubhadhara: T / T 30% pamberi pehositi dhipoziti, chiyero chakatarisana chakagamuchira kopi yeB / L.
Yapfuura: D Pale Palisade Fence
Inotevera: Yakadzvanywa Spear Fence